संसद पुनर्थापना :अन्तत : प्रधानमन्त्री फेरियो ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
संसद पुनर्थापना :अन्तत : प्रधानमन्त्री फेरियो !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ । मुद्धाको फैसला आउन अझै केही हप्ता लाग्नेछ । विपक्षी गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा पनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नियुक्तीको मागसहित उक्त मुद्धा दायर गरिएको छ । यता, एमालेको एक पक्ष माधव समूहलाई एमालेमै समाहित हुन नदिन विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा माधव नेपाललाई विकल्पको रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।